‘Lufuna i-ANC udaba loweTheku’ | Isolezwe
‘Lufuna i-ANC udaba loweTheku’
Isolezwe / 3 September 2012, 4:00pm /
UZeth Luzipho we cosatu no Themba Mthembu we SACP e City Hall.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
I-SACP ne-Cosatu KwaZulu-Natal bafuna uKhongolose ungenelele enkingeni ekhungethe uMasipala weTheku, ehlanganisa ukungabibikho kozinzo ophikweni lwamaphoyisa nemibiko yezinsolo zenkohlakalo kulo masipala.
Lama dlelandawonye kaKhongolose akusho lokhu esithangamini nabezindaba izolo lapho abecacisa ngezinye zezinqumo ezithathwe emhlanganweni obungowokuqala selokhu iSACP neCosatu esifundazweni bekhethe ubuholi obusha.
Lezi zinhlaka zithe yize zisijabulela isimemezelo seMeya uMnuz James Nxumalo sokuthi kuzoqashwa ngokugcwele abasebenzi abayitoho kumasipala weTheku kodwa izinkinga ezikhona zikhomba ukuthi kudingeka ukungenelela okuphu-thumayo kulo masipala.
“Aseneme neze ngokungabibikho kozinzo eThekwini futhi okusiphatha kabi kakhulu ngumbiko wakamuva okhomba ukuthi kunemali ebalelwa ku- R2 million engazange isetshenziswe onyakeni wezimali. Asazi ukuthi lokho kungenzeka kanjani kunabantu abampofu abasadinga ukuhlinzekwa ngezinsiza ezahlukene. Sikubona kungamukelekile futhi kungenabo ubuntu,” kusho uMnuz Themba Mthembu weSACP.
Okunye okukhalisa iSACP neCosatu kube wudaba lwesinqumo sikaMasipala weTheku sokuhoxisa udaba obelusenkantolo lwethenda yezindlu ebiphucwa abakwaMpisane ngoba kunezikhalo ngomsebenzi wabo wokwakha izindlu zaseMlazi okuthiwa zaziwa.
Lo masipala ugcine unqume ukuthi wenze isivumelwano sokuthi unikeze abakwaMpisane imali engu-R176 million ukuze baqhubeke nokwakha izindlu ezingu-2 825 ebese zisele.
UMthembu uthe abagculisekile neze ngalokhu yingakho befuna uKhongolose ezingeni lesifundazwe ungenelele ngoba kuyonakala.
Okunye lezi zinhlaka ezikubona kuyihlazo wudaba lombiko okhishwe nguMcwaningimabhuku-Jikelele uMnuz Terrence Nombembe oveza ukuthi komasipala abangu-50 KwaZulu-Natal bahlanu kuphela abathole imibiko engconywana.
Ngaphandle kwalokho udaba lwama-Amigos lokuhoxiswa kwamacala abebhekene noNkk Peggy Nkonyeni noMnuz Mike Mabuyakhulu alusalanga ngaphandle.
ISACP ithe ayingabazi ukuthi lama cala ayinkomba yenhlese yezombusazwe ngaphakathi kumadlela-ndawonye ngoba njalo uma kuza izingqungquthela zokukhetha ubuholi, uNkk Nkonyeni ubhekana namacala enkohlakalo, okuthi uma sekudlule lezo zingqungquthela bese eyahoxiswa.
Lezi zinhlaka zibuye zathinta nodaba lomdwebo omusha kaMengameli Jacob Zuma zathi awusesikhona ukucwasa kodwa usuhambisana nendaba yobuzwe.
Zikholwa nawukuthi lokhu kuyahambisana nesenzo se-ANCYL yaseLimpopo emashe yakhombisa izingqwembe ezinenzondo ngabantu abangamaZulu.
UNobhala weCosatu uMnuz Zet Luzipo uthe bafuna kushaywe umthetho ozovikela ihhovisi likaMengameli naye uqobo.